Gabadhaydu waxay dhowaan i weydiisay: "Hooyo, ma dhab baa in ka badan hal jid oo loo yeelo bisadda"? Waan qoslay. Way ogaatay macnaha ereygaasi, laakiin waxay runtii su'aal dhab ah ka qabtay bisadan liidata. Caadi ahaan waxaa jira wax ka badan hal jid oo wax lagu qabto. Marka ay timaado sameynta waxyaabo adag, annaga Ameerika waxaan aaminsanahay "xariifnimada qadiimka Mareykanka". Ka dib markaa waxaan leenahay jaangooyada: "Baahnadu waa hooyada curinta". Haddii isku daygii ugu horreeyay lagu guul darreysto, naftaada ammaan oo mid kale sii wad.
Markuu Ciise baray naftiisa iyo jidadka Eebbe, wuxuu siiyay aragti cusub wax walba. Wuxuu iyagii tusay jid ka wanaagsan, Jidka ruuxa sharciga ah, ee ma aha xarka (sharciga). Wuxuu iyagii tusay jidka jacaylka halkii uu ku xukumi lahaa iyo qaladka. Oo wuxuu u keenay iyaga (iyo annagaba) qaab ka wanaagsan.